Zimbabwe: Zim Clergyman Charged With Plotting to Overthrow Mnangagwa's Govt - allAfrica.com
Zimbabwe: Zim Clergyman Charged With Plotting to Overthrow Mnangagwa's Govt
Zimbabwean authorities on Thursday 17 January 2019 charged His Generation Church leader and pro-democracy campaigner Pastor Evan Mawarire with subverting a constitutional government following anti-government protests staged to show dissatisfaction with President Emmerson Mnangagwa's mismanagement of the economy.
The contents of the video, the State alleged, were meant to subvert a constitutional government in that Pastor Mawarire and Mutasa were coercing Zimbabwean workers to embark on a work boycott and encouraging civil disobedience and resistance to the country's laws.
State prosecutor Mirirai Shumba charged that Pastor Mawarire's alleged utterances recorded on video allegedly caused members of the public to commit acts of public violence and rampant looting.
Pastor Mawarire, who briefly appeared in court on Thursday 17 January 2019 returns to Harare Magistrates Court on Friday 18 January 2019 for continuation of court proceedings before Harare Magistrate Lucy Mungwari, who is expected to deliver a ruling on an application filed by the clergyman's lawyers challenging his placement on remand. The defence lawyers argued that Pastor Mawarire did not commit any offence warranting his arrest.
This is not the first time that Pastor Mawarire has faced charges of subverting constitutional government, incitement to commit public violence and committing public violence as he was once charged for breaching these laws in 2016 and 2017, when he was accused of inciting Zimbabweans from "all walks of life either locally or internationally" to revolt and overthrow former President Robert Mugabe's administration.